कर्णालीकी साहसी महिला, जसले देखाईदिईन यस्तो चमत्कार – Jaljala Online
मङ्सिर १, काठमाडौँ । भनिन्छ– एउटा खुट्टाले दुई वटा डुंगा चढ्नु हुँदैन । यसको अर्थ हो- एक जनाले धेरै पेशा नपनाउनु । तर सुर्खेतमा जन्मेकी एक साहसी महिला छिन् जसले तीन ओटा फरक फरक विधामा एकैपटक यात्रा तय गरिरहेकी छन् । उनी हुन्- नन्दा बश्याल ।
यो खबर शेरबहादुर थापाले लोकान्तरमा लेखेका छन् । जो अहिले खेलाडी मात्रै नभएर कलाकार तथा महिला अधिकारकर्मीको भूमिकामा सशक्त रूपमा देखा परेकी छन् । सुर्खेत जिल्लामा सबैभन्दा पहिलो महिला तेक्वान्दो खेलाडीको रूपमा परिचित नन्दा वीरेन्द्रनगर ६ सुर्खेतमा जन्मेकी हुन् । विगत २६ वर्षदेखि खेलकुद तथा कलाकारिता क्षेत्रमा अनवरत रूपमा संघर्ष गर्दै आइरहेकी नन्दा विगत आठ वर्षदेखि महिला अधिकारकर्मीको रूपमा समाजमा योगदान पुर्‍याउन तल्लिन छिन् भन्दा अनौठो नहोला ।
उतिबेला सुर्खेतमा रंगीन टेलिभिजन आइपुगेका थिएनन् । सादा टेलिभिजनमा देखाइने हरेक लडाईंमा पुरुष मात्रै देखाइने गरिएको हुन्थ्यो । उनी आफूलाई केटीको रूपमा लिने गर्थिनन्, बरू आफू केटा नै हौं भन्ने लाग्थ्यो र केटाहरूसँगै विभिन्न खेल खेल्ने उनको बानी नै परेको थियो । ‘केटी भएपनि आफू आत्मरक्षा गर्न सक्ने हुनुपर्छ । लडन सक्नुपर्छ भन्ने कुरा मनमा लागिरहन्थ्यो । ठूलो भएपछि प्रहरी हुने, ड्रेस लगाएर देशको रक्षा गर्ने भावनाले मनमा डेरा जमाउँदै गयो । यो ६ कक्षामा जन माध्यमिक विद्यालयमा पढ्दाको कुरा हो,’ उनी भन्छिन्, ‘प्रहरी हुनको लागि खेल खेल्नुपर्ने, बलियो हुनुपर्ने थियो । उतिबेला सुर्खेतमा खेलहरू खेलिने भनेको रंगशालामा नै हुन्थ्यो । शुरूमा मैले तेक्वान्दो सिक्ने अठोट लिएँ ।’
विसं २०५४ सालमा उनले व्ल्याकबेल्ट प्राप्त गरिन् । ‘राजा वीरेन्द्रको जन्मदिनको अवसर पारेर मैले बेल्ट लिएको हो । त्यतिबेला काठमाडौंमा नै बेल्ट पाइन्थ्यो । त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गरेर मैले गोल्ड मेडल पनि जितें,’ उनी भन्छिन् ।
उनी सानैमा पनि गीतको तालमा नाच्ने गर्थिन् । उनलाई अभिभावकले भनेअनुसार खुट्टामा उभिने भएदेखि नै नाच्न थालेकी थिइन् रे ! कलाकारिता सिंगार रसमा गर्नुपर्ने, मोडल भनेपछि सबैको नजर पर्ने, बलियो भएर हिँडनु पर्ने उनको बुझाइ छ । उनी आफ्नो रगतमा नै नृत्य नै छ जस्तो महसूस गर्छिन् । ‘सानैदेखि तालमा राम्रै नाच्थेँ रे ! देउसी खेल्दा बोकेर दाइ दिदीले लिनुहुन्थ्यो ।’
उनी नृत्य मात्रै गर्थिनन् । नृत्य निर्देशक पनि हुन् । ‘मैले गरेको कोरियोग्राफरबाट बेस्ट डान्स डाइरेक्टर उपाधि पाएकी थिएँ । ४ महिनाअघि कतारमा बेस्ट मोडलको अवार्ड पाएँ । सगरमाथा म्यूजिक अवार्डमा अभिनयबाट बेस्ट एक्टरको मेडल पाँए,’ उनी प्रफुल्ल हुँदै सफलता सुनाउँछिन्, ‘ ‘मेरो आफ्नै म्यूजिक कम्पनी छ । काजोल म्युजिक कम्पनी २०७० सालमा खोलेकी हुँ ।’
आँखा जुध्यो भन्ने उनको भिडियो बजारमा आएको छ । अभिनेता दिलिप रायमाझीसँग उनले अभिनय गरेकी छन् । ‘सानो भयो मादलु’ नामक तीज गीत उनको आफ्नै आवाजमा छ । मोडलिङ पनि उत्तिकै जमेकी छन् ।
उनी कार्यक्रमकै लागि देश तथा विदेश चहारेकी छन् । विश्वका दर्जन बढी देशमा पुगिसकेकी बश्यालले नेपाली महिलाको अवस्थाबारेमा सोच्न थालिन् । अन्य देशका महिला र नेपालका महिलामा धेरै फरक रहेको उनले बुझिन् । महिलालाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ र पीडामा भएका महिला दिदिबहिनीहरूलाई कसरी खुशी दिन सकिन्छ भन्ने सोच आउन साथ उनले ‘सिस्टर नेपाल’ नाम संस्था स्थापना गरिन् सात वर्षअघि काठमाडौंमा ।